Elementor: Tonian-dahatsoratra mahafinaritra amin'ny famolavolana pejy sy lahatsoratra WordPress tsara tarehy | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 17, 2020 Alarobia, Desambra 23, 2020 Douglas Karr
Androany tolakandro dia nandany ora vitsivitsy aho ary nanangana ny tranokalan'ny mpanjifako voalohany tamin'ny alàlan'ny Elementor. Raha ao amin'ny indostrian'ny WordPress ianao dia mety efa nandre ny buzz momba an'i Elementor, dia nahatratra 2 tapitrisa ny fametrahana azy ireo! Ny namako Andrew, izay miasa NetGain Associates, nitantara tamiko ny momba ilay plugin ary efa nividy fahazoan-dàlana tsy voafetra aho hampiharana azy na aiza na aiza!
WordPress dia nahatsapa ny hafanana tamin'ny fahaizany manova barbariana. Vao tsy ela akory izay dia nanavao an'i Gutenberg izy ireo, tonian-dahatsoratra misy sakana izay manome fampiasa fanampiny… saingy tsy eo akaikin'ny fomba hafa karamaina eny an-tsena. Amin'ny fahamarinana rehetra, antenaiko fa hividy iray amin'ireo plugins mandroso kokoa fotsiny izy ireo.
Nandritra izay roa taona lasa izay dia nampiasa aho Avada ho an'ny mpanjifako rehetra. Ny temotra dia namboarina tamim-pahamendrehana, amin'ny alàlan'ny fampiarahana ny lohahevitra sy ny plugin mba hitazomana ny fahaizan'ny fandefasana. Sady tohanana tsara izy io ary manana singa mahafinaritra sasany izay nitaky fivoarana na fividianana.
Elementor tsy mitovy satria plugin fotsiny io ary afaka milamina miaraka amina lohahevitra rehetra. Ao amin'ny tranonkala namboariko ho an'ity mpanjifa ity androany, dia nampiasa lohahevitra fototra iray natolotry ny ekipa Elementor, ny Themeor Hello Hello.
Afaka nanangana tranokala misy valiny feno aho miaraka amin'ny menio miraikitra, faritra footer, pejy fidirana namboarina, ary fampidirana endrika… mivoaka avy ao anaty boaty. Naharitra kely fotsiny ny fahazarana ny hierarchy an'i Elementor, fa raha vao azoko ny templating, ny fahaizan'ny fizarana ary ny singa dia afaka notaritaritako sy narotsako ilay tranonkala iray manontolo tao anatin'ny minitra vitsy. Namonjy ahy andro maro io ary tsy mila manitsy kaody na CSS iray akory aho!
Fitsipika sy famolavolana WordPress Popup Publishing
Tsy matetika ny plugin dia misy fahaiza-manao mahavariana toy izany, fa amin'ny Elementor, azonao atao ny mametraka fepetra, fikafika ary lalàna mandroso amin'ny fomba tianao hamoahana ireo popup… amin'ny interface mora:
Tena mahatalanjona ilay mpamorona, ary manome ohatra tsy ho eny an-talantalana aza izy ireo mba hamolavola!
Ho fanampin'ny popup Functionality, Marketing Features dia misy
Rohy fiasa - Mifandray amin'ny mpihaino anao amin'ny alalàn'ny WhatsApp, Waze, Google Calendar & fampiharana bebe kokoa
Widget Countdown - Ampitomboy ny fahatsapana fa maika amin'ny alàlan'ny fampidirana timer famerenana amin'ny tolotrao.
Widget endrika - Veloma backend! Mamorona mivantana ny forme anao rehetra, miainga avy ao amin'ny editor Elementor.
Pejy fitobiana -Tsy mora toy izao ny famoronana sy fitantanana ny pejy fitobiana, ao anatin'ny tranonkalanao WordPress ankehitriny.
Widget kintana naoty - Manampia porofo ara-tsosialy ao amin'ny tranonkalanao amin'ny alàlan'ny fanisana naoty na kintana ary fanoritana azy araka izay tianao.
Widget Carousel fijoroana ho vavolombelona - Ampitomboy ny porofo ara-tsosialin'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fampidirana karatra fijoroana vavolombelona miovaova ho an'ny mpanjifanao mpanohana indrindra.
Tsy plugin tonga lafatra anefa. Nahita fetra vitsivitsy tokony ho fantatrao aho:
Karazana paositra namboarina - Na dia azonao atao aza ny manana Karazana Post Custom amin'ny tranokalan Elementor anao dia tsy afaka mampiasa ny Elementor Editor ianao handrafetana ireo karazana lahatsoratra ireo. Ny vahaolana iray amin'izany dia ny fampiasana sokajy paositra hifehy ny tranokala manerana.
Blog Archive - Na dia afaka manamboatra pejy arisiva bilaogy mahafinaritra miaraka amin'i Elementor aza ianao dia tsy afaka manondro an'io pejy io ao anatin'ny fikirakiran'ny WordPress anao! Raha manao izany ianao dia ho tapaka ny pejinao Elementor. Ity dia olana iray tena hafahafa izay naharitra ora maromaro vao hitako. Raha vantany vao nataoko tsy misy ny pejy bilaogy, dia nandeha tsara ny zava-drehetra. Kely izy io, na izany aza satria ny fametrahana ny pejin'ny bilaogy dia ampiasaina mandritra ny asan'ny modely WordPress maromaro. Tsy hanakana ny tranokalanao izany amin'ny lafiny rehetra, fa olana hafahafa ihany.
Fanohanana Lightbox - Ny endri-javatra mipoitra dia milay tokoa, fa ny fahaizana manana bokotra iray fotsiny hanokatra boaty jiro hijerena galeriana na horonan-tsary dia tsy eo. Na izany aza, misy ny mahafinaritra Fanampiny ilaina izay manome an'io endri-javatra io sy ny hafa am-polony hafa.
Anisan'izany ny fampidirana
Raha efa nanao programa fampidirana ao amin'ny WordPress ianao, dia fantatrao fa sarotra be izany. Eny, i Elementor dia efa nanamboatra fampidirana mialoha miaraka amin'i Mailchimp, ActiveCampaign, ConvertKit, Fanaraha-maso ny fampielezan-kevitra, Hubspot, Zapier, donReach, Drip, GetResponse, Adobe TypeKit, reCAPTCHA, Facebook SDK, MailerLite, Slack, ary Discord!
Jereo ny endri-javatra Elementor rehetra
Manitatra Elementor miaraka amin'ny endri-javatra bebe kokoa!
Ultimate Addons dia fitehirizam-bokin'ny widgets Elementor tena mamorona sy tsy manam-paharoa izay manokatra karazana famolavolana vaovao ho anao. Ity fonosana tsy mampino ity dia misy:
Widgets & Extensions - Tranomboky mitombo misy 40+ widgets Elementor tsy manam-paharoa izay mitondra ny fahaizanao mamorona endrika hafa vaovao!
Endrika tranonkala - Maodely maherin'ny 100 namboarina sy mahavariana hita maso izay hanafainganana ny fizotranao.
Sokajy: - Maherin'ny 200 ireo sakana efa niorina dia notaritaritina, nalatsaka ary namboarina manokana, manome endrika tsy manam-paharoa ny pejyo amin'ny tsindry vitsivitsy.
Na matihanina amin'ny famolavolana ianao na vaovao, dia hanafaingana ny fizotranao ianao ary hahatratra endrika miavaka miaraka amin'ny fahamorana tanteraka.
Fampahafantarana: Miavonavona aho mampiasa ny rohy mpampifandray ato amin'ity lahatsoratra ity!
Tags: elementoradd-on an'ny singamodely pejy elementorwidgets elementorplugin plugin WordPress malazatonian-dahatsoratra wordpressmpamorona pejy wordpressmpampanonta pejy wordpressplugin WordPress
Plugin WordPress: manokatra horonantsary anaty boaty maivana miaraka amin'ny Elementor